ဟင်းစပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဟင်းစပ်
Posted by ဇီဇီ on Oct 16, 2012 in Food, Drink & Recipes, My Dear Diary | 58 comments
ဒီရွာလေးထဲကို ကိုယ့် တီချယ်ကြီးရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့မနေ့ကပဲ ရောက်တယ်။ အားလုံးဆီကို အကြမ်းဖျင်းလည်ပတ်ပြီး လိုက်ဖတ်လိုက်တာ၊ ရွာထဲက လူတွေအတော် စာရေးကောင်းကြတာပဲကိုး။ ကိုယ့်မှာက ရေးအားက သိပ်မကောင်း၊ ရေးပြီးသား အဟောင်းထဲက မွှေရအောင်ကလည်း လောက်လောက်လားလားမရှိ။ ကိုယ်တိုင်က မန္တလေးကို လွမ်းမှ လွမ်းချင်းတွေ ထွက်လာတာ။
လွမ်းရေးထက် ဝမ်းရေးခက်လေတော့ နေ့တိုင်းလည်း မလွမ်းနိုင်ပါဘူး။ (အဲဒါ တစ်နေ့တစ်ပုဒ် မတင်နိုင်ကြောင်း ကြိုကာထားခြင်းဖြစ်၏။)
ဆိုတော့ကာ မနေ့က တီချယ်နုတင်ခိုင်းထားတဲ့ ဟင်းစပ် လေးတွေပဲတင်ပါမယ်။ မန်းလေး အိမ်ကို လွမ်းတုန်းက ဖေ့ဘုတ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပို့(စ) ကို နည်းနည်းမွန်းမံထားတာပါ။
အစားအသောက် ဝါသနာ မပါသူတွေတော့ သည်းခံကြပါ။
ဟင်းစပ် (၁၃ ဂျူလိုင်၊ ၂၀၁၂)
ဗိုက်ဆာတယ်။ ဗိုက်ဆာတော့ အစားအသောက်တွေ အကြောင်းတွေးမိတယ်။ ကိုယ့် မေမေ ရဲ့ ဟင်းစပ်အတည့်လေးကို မစားရတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
ကိုယ့်တို့ သားအမိ တူတဲ့ အချက်က ဟင်းချက်ရမှာ အလွန်ပျင်း ပြီး များများစားစားလည်း မချက်တတ်ဘူး။
ကိုယ်စားချင်တဲ့ ဟင်းစပ်လေးကို သူများချက်ကျွေးချင်အောင် ပူစာတတ်တာလေးပဲရှိတာ။ ကဲ မှတ်မိသလောက် ဟင်းစပ်လေးတွေကို ရေးမယ်ဗျား။
၁) နွေဦးရာသီလေးများဆို တောကြက် ဆီလည်ရေလည်ချက်လေး ကို သရက်ကင်း၊ ငပိရည်တို့လေးနဲ့ စားရတယ်။
၂) နွေလည်ရာသီလောက်ဆို သရက်သီးတွေမှည့်ပြီ။ ငါးမြင်းဗိုက်သား ဆီပြန်လေးနဲ့ သရက်သီးမှည့်လေးနဲ့ စားကြတာ။
၃) မိုးဦးကျဆိုလို့ကတော့ မျှစ်ကိုပြုတ် ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ မြေပဲမှုန့်တို့နဲ့ သုပ်ပြီး ငါးဖယ်လေးကြော်၊ ဘူးသီးဟင်းခါးလေးနဲ့ စားသပေါ့။
၄) မိုးလေး အေးအေးရွာပြီဆို၊ ဝက်သား သုံးထပ်သားလေးကို မျှစ်ချဉ်လေးနဲ့ အရည်သောက်ချက်၊ ငရုတ်သီးဆားထောင်းလေးနဲ့ဆို အလွန်လိုက်ဖက်တယ်။
၅) တစ်ခါတစ်ခါ မိုးရွာလွန်းလို့ ဈေးမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာရှိတဲ့ ငါးသေတ္တာကို ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ကြော်ချက်လေးချက်၊ ပဲနီလေးနဲ့ ကြာဆံလေး ကို အရည်သောက်လိုက်လဲ ထမင်းမြိန်တာပဲ။
၆) ပုစွန်ဆိတ်လေးရတဲ့နေ့ဆို မျှစ်ပါးပါးမျှင်မျှင်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းရောကြော်၊ ပတတ်စာနဲ့ကင်ပွန်းချဉ် ရည်လေးနဲ့ စားရလို့ကတော့ ဗိုက်ကားပြီဲ။
၇) ဒညင်းသီးကို ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ငပိချက်ချက်တဲ့နေ့ဆိုရင် ပဲကြီးဟင်းလေးနဲ့ အသားကတော့ ဝက်သားကို ဖလံတောင်ဝှေးနဲ့ကြော်လိုက်တာပဲ။
၈) မန်ကျည်းရွက်နုများမြင်လို့ကတော့ သုပ်ပြီး ကြက်သားလေး အကျွပ်ကြော်ပြီး ကြာရိုးဟင်းခါးနဲ့ တွဲလိုက်တယ်။
၉) တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ပါရင် (ဘူးသီး၊ ခရမ်းသီး၊ အာလူး၊ ရုံးပတီသီး၊ ငါးရန့်ခြောက်ရိုး၊ ဒန့်ဒလွန်သီး၊ ပဲစောင်းလျားသီး) တို့နဲ့ သီးစုံချဉ်ရည်ဟင်းလေးချက်ပြီး ဘဲဥအချပ်ကြော်ပြီး ငရုပ်သီးငါးခြောက်ကြော်များဆိုလို့ကတော့။။။။။။
၁၀) သွေးတော့နည်းနည်းတက်သော်လည်း၊ ဆူးပုတ်ရွက်ကိုဘဲဥနဲ့ကြော်ပြီး ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်လေး ကိုလဲ အလွတ်မပေးချင်ပြန်ဘူး။
၁၁) ချဉ်ပေါင်ရည်တည် နဲ့ ငပိထောင်းဖြစ်ရင်တော့ ငါးကလေး အိုးကပ်လိုက်တာပေါ့။
၁၂) ငါးပတ်ကိုမွှေမိလို့ကတော့ ကြက်ရိုးနဲ့ ကျောက်ဖရုံ ဟင်းခါးလေးတည်၊ ကိုင်းခရမ်းချဉ်သီးလေးကို ငပိချက်ချက်ရင် အလွန်လိုက်တယ်။
၁၃) ဗမာပဲငပိ လေးကို ခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ကြော်၊ ဝက်ရိုး ကြံမဆိုင်အရည်လေးနဲ့ ကြက်သားအချိုချက်လေးဆို ဆောင်းဦးပေါက်ရာသီလေး မှာ စားလို့အရမ်းကောင်း။
၁၄) ရေချိုပုစွန်ထုတ်ကြီး ဆီပြန်ချက်ရင် ငံပြာရည်ချက်ကို (သခွါးသီး၊သံပုရာသီး၊ ဘူးသီးပြုတ်၊ ရှောက်ရွက်) စသည်ဖြင့်တို့ပေါ့။ မုံလာဥချဉ်ရည်ပူပူလေးသောက်ချင်ရင် ချက်လိုက်ဦး။
၁၅) ပိန်းဥ ကို ဝက်သားအကြေသားလေးနည်းနည်း၊ ကြက်မြစ်ကြက်သည်းလေးနည်းနည်း၊ ငါးဖယ်လေးနည်းနည်းကို ချိုနေအောင်အရည်တည်၊ မုံညင်းစိမ်းလေးခတ်၊ ခါချက်ဥနီလေးကို ခြစ်ပြီး ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့အချဉ်သုပ်လိုက်ရင် ထမင်းဘယ်နှစ်ပန်းကန်ယူမိမှန်းကို မသိဘူး။
၁၆) အကြံကုန်တဲ့နေ့ဆို ကြာဆံဟင်းခါးပူပူကျဲကျဲ လေးကို ငါးဖယ်ဆီပြန်လေးနဲ့ ချက်တဲ့သူစိတ်ရှည်ရင်တော့ ရှောက်သီးသုပ်ခိုင်းရတာပေါ့။ ဟီးဟီး။
တစ်ချို့ကတော့ ဘာအသား ညာအသားမစားကြဘူး။ ကိုယ်တွေလည်း ကိုးနဝင်းလေးများ စိပ်ရင် တစ်ပတ် တစ်ရက်လောက်က သတ်သတ်လွတ်စားရက်ဖြစ်တော့ သတ်သတ်လွတ်ဟင်းစပ် လေးပါ တလက်စတည်း ရေးပါရစေ။
၁) ခွေးတောက်ရွက်နဲ့ ဘယာကြော်ရောကြော်ပြီး ပဲကြီးဟင်း အရည်သောက်လေး စားချင်လား။
၂) မြေပဲဆံကို ထောင်းချက်ပြီး ဘူးသီးကြော်လေးနဲ့ ဆိုရင်စားမလား။
၃) နွားနို့ခဲကို ဆီပြန်ချက်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်လေးရော။
၄) ပဲပုပ်စေ့ကို ကြော်ပြီး ချဉ်ပေါင်ချဉ်ရည်လေးနဲ့လည်း စားလို့ကောင်းတယ်လေ။
၅) ကန်စွန်းရွက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်လေးနဲ့ကြော်ပြီး အာလူး ကြာဆံသုပ်လေးဆို ကောင်းမလား။
၆) ခရမ်းသီးလေးကိုနှပ်ပြီး အာလူးပါးပါး အကြွပ်ကြော်စားရမယ် ဆိုရင်ရော။
ကဲ တော်လောက်ပြီ။ ဗိုက်လည်း အတော်ဆာလာပြီ။ ရုံးအောက်ဆင်းပြီး ဖြူဖတ်ဖြူရော် ကြက်ဆီထမင်း သွားစားလိုက်ဦးမယ်နော်။
ဒါမှ ရသမြောက် စာပေ …
အားပေးသွားပါတယ် ဗျို့ …
ကိုယ်တိုင်လဲ အချက် အပြုတ် စိတ်ဝင်စားတယ်…
အစားကောင်း တွေ့ရင်လဲ ခင်သူတွေ သတိရတတ်သူမို့
အဲ့ဒီ ဟိုဂိုင်းချုပ် နဲ့ ဂိုင်းသားတွေသာ သတိထား သိလားနော်…
ကြည်ဆောင်းလဲ ကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့ ၀ါသနာကမပါ
ဒီစာရင်းလေးတို့ ထားလိုက်ပါပြီ …
ဇာလေး စာရေး မကြာသေး အာမွှေးပါရစေ.. ရှလွတ် ဝသေးဘူး ရှလွတ်… ရသေးဘူး ရှလွတ်…။ ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်နော်… ကျန်တာတော့ အိမ်ကြမှ အခု လူမြင်ကွင်းမှ ချက်ချာဂျီး..
အကျန်ပေးချင်တာ ကြောင်သားစားရင် အခြားအဆာပလာ ဘာမှမထည့်နဲ့ တခါထဲ လျှာလေးနဲ့လိပ်ပြီး မျိုချလိုက်။ ကောင်း….မှ….ကောင်း…။ ရှလွတ်… ဝသေးဘူးကွာ.. ရှလွတ်….။
မဆွိရေ တရွာလုံးမှာသတိထားရမဲ့ ကြောင်ပါ ။ ရိုးရိုးကြောင်မဟုတ်ပါဘူး။
သရော်စာရေးမလား ထေ့မလား ရိမလား နိုင်ငံရေးလား ဘာသာရေး လား ကဗျာလား အကုန်လုံးကို နှံ့စပ်သလောက် ရွာမှာ ရှိသမျှ ရွာသူတိုင်းက သူ့ကို ၀ိုင်းခြစ်နေသယောင်ယောင် ရေးတတ်ပါသေးတယ်။ တရွာလုံး ခြစ်စရာကုန်သွားရင်တော့ မုန်းလှပါချည့်ရဲ့ အော်နေသူကိုတောင် သွားခြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
နာနာလေးရဲ့ ငယ်ချစ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ ရှာရာဗိုဗာနဲ့ သူနဲ့ ဘာလိုလိုလို့လည်း လူအထင်ကြီးအောင် ရေးတတ်ပါသေးတယ်။ တကယ်က ဟိုက ကြောင်ချီးကြောက်လို့အနားတောင် အကပ်ခံတာ မဟုတ်ဖူး။
မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ရှေးခတ် ဘုရင်တွေရဲ့ နှစ် ၄၀ စစ်ကို အားကျပြီး ရွာထဲမှာ ကြေးမုံဆိုသူတယောက်နဲ့ ခေတ်သစ် စကားစစ်ထိုးပွဲကို ကြိုးစားပမ်းစား နည်းမျိုးစုံနဲ့ နွှဲနေသူ ဦးကြောင်ပါ။
ကျမကတော့ ကြောင်ဆာတေး မစားဖူးသေးဘူး ။
လူညီရင် အမွှေးနှုတ်ပြီး ကင်စားပစ်ရအောင် အမ။
အမ ကျမကို ရေးချင်တယ်လို့ ပြောထားတဲ့ အကြောင်းလေးလည်း ရေးအုန်းလေ။
ပု၊ အစ်မ က ကြောင်သားမစားဘူးကွယ်။
ရေးချင်တဲ့ အဲ့ဒီ အကြောင်းအရာကလည်း စဉ်းစားထားတဲ့ အခြေအနေကနေ မတက်နိုင်သေးဘူး။
လာမယ် ကြာမယ် ဖြစ်တယ်။
၆) နဲ့ ၁၁) ကိုဖတ်ရင်း သွားရေကျလို့မြိုချရတာ “ဂလု” လို့တောင်မြည်တယ်…………း)
ထမင်းဆိုင်ဖွင့်မယ် ရှယ်ယာပါမလား လောလောဆယ်တော့ ဗိုက်ထဲမှာ ကုလားဘုရားပွဲကော တရုတ်နဂါးပွဲပါလှည့်နေပြီ
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အစ်မရယ်…တစ်နေ့တစ်နေ့ ရုံးဆင်းရင် လှည်းတန်းဈေးကို ဟိုဘက်ဒီဘက် အကြိမ်တစ်ရာလောက်လျှောက်ပြီး စဉ်းစားရတာ…အခုတော့ စိတ်ကူးရသွားပီ…
ကျေးဇူး၊ သန့်ခ်ယူ၊ ရှဲ့ရှဲ့၊ ဂိုမားစ်မီသာ၊ အာရိဂတ်တောကိုဆိုင်းမက်စ်၊ မက်ခ်ဆီဘိုးကူး၊ ကျေးဂျူးကဘာဆာရော….
အင်းဖြစ်ချင်တော့ ပိုက်ပိုက်နဲပြီး ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်မှ ရွာသူအသစ်လေးရဲ့ ဟင်းစပ်နည်းကောင်းတွေကို လာဖတ်မိပါလေပေါ့
ငရုတ်သီးစိမ်း ဒီအတိုင်းကိုက်ပြီး ဆားကလေးနဲ့ ပဲ မန်မန်ဖြူဖြူ ပလုတ်ပလောင်း ဝါးစားလိုက်တော့မယ်
မဒမ်ထူးဆန်းကို ပရင့်ထုတ်ပေးထားလိုက်မှ .. တနေ့ တနေ့ ဘာချက်ရမလဲ စဉ်းစားရတာ ဆံပင်ဖြူတယ် ဆိုတာ နဲနဲ သက်သာ မလားမသိ.. :hee:
ရုံးအောက်မှာ စောင့်နေရတာ ကြာပါတယ်ဆိုလို့ တင်းနေဒါ…
လတ်စသတ်တော့ ဇာလေးက ဂေဇက်မှာ ဟင်းစပ်ရေးနေတာကိုး…
တော်ပီ.. ချိတ်ချိုးဒယ်… ရွာကိုပဲ အချိန်ပေးတော့မယ်ပေါ့လေ..
တီချယ်ကြီး သတိပေးလို့ အဗေတာဓါတ်ပုံမှာ ကိုရင်ထင်မှာစိုးလို့
ပုံပြောင်းလိုက်ပါပီ… ဇာအတွက်ဆို ဒီကလိုအပ်ရင် ဘွတ်အဲ.. ဘွဲအဲ.. နော့်..
သူဝေ – ကိုယ်တိုင်ဟင်းမချက်ရဘူးဆိုရင်တော့ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ချင်ပါရဲ့။
ရွှေဖြူ – ချဉ်ရည်ဟင်းကြိုက်တတ်တာလား။
ကိုကြောင် – ကြောင်စာ ဆိုတာ ဒီကြောင်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ (ဒီကြောင် စားနေတာမပြီးနိုင်မစီးနိုင်မို့ အစားကြီးတဲ့
ကြောင်လို့ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ ရှင်)
ကြည်ဆောင်း – ကိုယ်တိုင်မချက်ချင်တော့လည်း ချော့နည်းပေါင်းစုံ တတ်ရတာပေါ့လေ။
မအိ – ဘယ်သူတွေကို သတိထားရမယ် ဆိုတာ စာရင်း ရေးထားရမလားဟင်။
ဟိုဂိုင်းချုပ် – အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
လုံမလေး မွန်မွန် – အစ်မက ဟင်းအရင်စပ်ပြီးမှ ဈေးသွားမဲ့ သူကို မှာတာ။ ဟင်းကိုလဲ ရာသီဥတု အလိုက် စားကောင်းမယ်ထင်တာလေးစပ်တယ်။
ကိုပေ – ပိုက်ပိုက်မရှိလည်း ထမင်းစားကောင်းတဲ့ မြန်ဆန်သက်သာ ဟင်းစပ်လေးတွေရှိပါ့ဗျာ။
ကထူးဆန်း – အရင်က ကျနော်တို့ အိမ်မှာ အဒေါ်ကဟင်းချက်တော့ ဟင်းစပ်ရမှာ ခေါင်းကိုက်တယ်တဲ့။ တစ်ပတ်စာ စပ်ပြီး ရေးပေးထားရတယ်။
ကိုရင်စည် – ပုံပြောင်းတယ်သာဆို ဓာတ်ပုံမှာ ကိုရင် ပုံရှိတုန်းပါပဲလား။
ယောင်းမလေးရေ (အဟိ မောင်ငယ်အံစာအတွက်ဝင်ဦးပေးတာ အူးကြောင်နဲ့ ကိုရင်စည်နောက်ပါသွားမှာစိုးလို့) တော်ချက်ကတော့နော် မပြောတော့ဘူး။
နံပါတ် ၇ ဟင်းစပ်ကလည်းသွေးတော့တိုးမလားမသိနော်။
ယောင်းမလေးနဲ့တော့ တအိမ်တည်းအတူနေလို့မဖြစ်ချေဘူးချော့ပြီးဟင်းတွေချက်ခိုင်းနေရင်ဒွတ်ခ။ :harr:
အလုပ်ကပြန်ပင်ပန်းရတဲ့အထဲ ဈေးကို ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်လျှောက်ပြီးဘာချက်ရပါ့မလဲစဉ်းစားရတာလည်းမလွယ်ဘူး အခုတော့ ဟန်ကျတာပဲ ညနေဈေးပြေးရမယ်။
အိုက်ဒါမှ နာ့မမဂျီး ကွ …
မမဂျီးရေ မောင်လေးဂဒေါ့လေ ..
ဇာလေး ဘာချက်ကျွေးကျွေး၊ သူ့မျက်နှာလေးသာ ကြည့်ပြီးစားလိုက်ရရင်လေ ….
အစ်မ ရွှေကြည် နဲ့ ကို အံစာတုံး – အင်အားကောင်းလှချည်လား ဟင်။ ဒီ အတိုင်းဆို ကျနော်လည်း အစ်ကိုကြီးတွေ မောင်လေးတွေ ခေါ်လာမှ ဖြစ်တော့မယ်။
Fall Guy – သွားရေခံလေးနဲ့ ဖတ်ပါနော်။
ကျနော်.. ကျနော်နဲ့.. အရေးလေးတွေ၊ အမန့်လေးတွေ၊ အတွေးလေးဒွေကြောင့်
ဒီက အူးစည်တော့ ကြွေမှာစိုးလို့ ခိုင်ခိုင်ချည်ထားရဒယ်…
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီဆိပ်ကမ်းကနေ ဒိုင်ဗင်ထိုးပီး.. မေခလာအကူအညီမယူပဲ
ခြင်္သေ့ကျွန်းကိုတောင် လက်ပစ်ကူးချင်လာပီ…. ဘွတ်..အဲ.. ဘွတ်အဲ…
ဒီနေ့ကစပြီး သားလည်း စားရေး အဲ.. (စာရေးကောင်းအောင်) ကြိုးစားတော့မယ်…
ကိုရင် မေခလာ မကူဘဲ လက်ပစ်ကူးချင်လာရင်လည်း
တစ်ယောက်လျှော့သွားတာပေါ့ …. အဲလေ .. ချစ်သက်သေ ဖစ်တွားဒါပေါ့ …
သို့ပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ ကိုရင် လက်ပစ်ကူးတုန်း .. အဟင်း …
Like လုပ်ပြီး.. ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ပို့လိုက်ကြောင်း…
အမေရိကားက.. ပုဂ္ဂိုလ်များ.. ဟင်းစပ်ဖတ်ပြီး.. ငတ်ကြီးကျကြပါစေသတည်း…။ :harr:
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဗိုက်တောင်ဆာလာသလိုလိုပဲ ….
နံပါတ် (၈) က ကြာရိုးဟင်းခါးဆို သိပ်ကြိုက် …
ရွာထဲမှာတော့ စာအရေးကောင်းသူ တစ်ယောက်တိုးလာတာ ၀မ်းသာပါတယ်၏
မန်းလေးသူ လဲဖြစ် ဆရာမကြီးတပည့်လဲဖြစ်ဆိုတော့
ရေးတော့ရေးချင်တယ် မရေးတတ်ဘူး ဆိုရင်လဲ အလုပ်မဖြစ်
ရေးတော့ ရေးတတ်တယ် မရေးဘူးဆိုပြန်ရင်လဲ အလုပ်မဖြစ်
အဲတော့ ရေးတတ်တာကတော့သေချာနေပြီဆိုတော့ အလုပ်ဖြစ်အောင်
ကိုရင်စည် နဲ့ ကိုအံစာ – ခင်စရာကောင်းသော မိတ်ဆွေများ အဖြစ်မှတ်ထားလိုက်ပါပြီရှင် (ရီရလို့)။
Kai – ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ချစ်လေး – ကျနော်လည်း ဟင်းခါးတွေပိုကြိုက်တတ်တယ်။
ဦးပေါက် – ဦးပေါက်ကို သိတာတော့ကြာပါပြီ။ ကျနော်ပြိုင်ပွဲဝင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံမှာလည်း ဦးပေါက် ပေးဘူးပါတယ်။ များများရေးဖို့ကတော့ ကြိုးစားပါ့မယ် ကလွဲပြီး မပြောတတ်ပါ။
အဲ့လိုအခါမျိုးဆို ဒီဟင်းစပ်လေး ကြည့်ပြီးချက်လိုက်မယ်နော်
ဟင်းစပ် အမယ်တွေအားလုံး စေ့စေ့ စပ်စပ် မှတ်သားပီး တင်ပြနိုင်တဲ့
မခိုင်ဇာကို ချီးကျူးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါမှ မှတ်မိနိုင်တဲ့ ကိတ်စမို့
ဟင်းချက်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရင်း အားကျမိပါတယ်။
မကောင်းတကောင်းကို့လက်ရာကို ကိုဘဲပြန်အားပေးပါမယ် ခိခိ။
မျစ်ချဉ် နဲ့ ဝက်သား တို့
နွားနို့ခဲ ဆီပြန်ချက် တို့ ကိုတော့ အရမ်း ကြိုက်တယ် ဇာလေး ရေ –
ဈေးထဲသွားပြီး ယောင်ချာချာ နဲ့ ဘာချက်စားရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတာ –
အခု ဇာလေး စပ်ပေးတဲ့ ဟင်းစပ် လေးတွေကို ချက်ဖို့ အကြံရပြီ –
တစ်လှည့်စီ ချက်စားရမယ် …
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် နော် …
ကြိုက်တဲ့ ဟင်းစပ်အတွဲလေးတွေ မှတ်သွားပါတယ်..အိမ်ကချက်စားနေကြ ဟင်းစပ်တွဲတွေ
တူတာလည်း တွေ့ရတယ်…မဇာလေး ဟင်းစပ်တွေ ချက်စားကြည့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်
ကျုပ်ကတော့ ငွေရေးကြေးရေး အဆင်မပြေတာနဲ့
တစ်ခါတစ်လေ ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြား၊ တစ်ခါတစ်လေ
အကြော်လေးနဲ့ ထ္မင်းကြမ်းလေး ဒါ့ကြောင့် အထက်ကပြောတဲ့
ဟင်းစပ်တွေဟာ ကျုပ်အတွက်တော့ မဆိုင်သလိုရှိနေလှပါလားနော်။
ဟင်းတွေကလည်း လွှတ်ကောင်းဗျာ။ yum! yum!
Welcome to our hamlet!!!
အလို…ငါ့ရှေ့မှာ Comment (၃၀)တောင်ရှိသွားပါလား။ဒီကနေ့ Internet အဝင်နောက်ကျ
သွားလိုက်တာ။ ဆူညံဆူညံအသံကြားပါတယ် ဘာများပါလိမ့်။ စ လုံးက ဟင်းလာရောင်းတာ။
ရောင်းသူကလေးမလေးက စကားအပြောကောင်းသတဲ့။ မှန်း ဘယ်သူများတုန်း။
အော်… ကောင်းမှာပေါ့။ သိတယ်မဟုတ်လား။ ချမ်းမြေ့ရိပ်ငြိမ်ခြံထွက်လေ။
ချောသတဲ့။ အော်ချောမှာပေါ့။ သူ့တီချာကြီးနဲ့ တစ်ခြားစီဟာကိုး။
တီချယ်၊ နောက်မကျပါဘူး။ ဆွိနဲ့ တီချယ်က အွန်လိုင်း ရောက်တဲ့ အချိန်မတူလို့ပါ။
ဒီလိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရွာလေးကို ခေါ်လာတဲ့ တီချယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
တီချာကြီး တပည့်တွေ လက်စွမ်းထက်ပါပေ့။
ပြောထားတယ်နော်၊ဖတ်ရုံနဲ့ အရသာမရှိဘူးလို့၊ တကယ်ကျွေးမှ အရသာရှိမှာ။
အင်းးးးးးးး ရွာမှာတော့ မိုးကြီးလို့
စားစရာပြတ်ရင် ဆင်တစ်ကောင်လောက် ရိုက်ချက်
မနို နဲ့ ပျိုပျိုမေ – နောက် ဟင်းစပ် အကူအညီလိုရင် ပြောပါရှင်။
ရွှေအိ – ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေကလွဲရင် ကျန်တာမချက်တတ်ပါဘူးရှင့်။
နှင်းနှင်း – ကျနော်တို့အညာမှာတော့ ဒီ ဟင်းစပ်တွေက အချက်များပါတယ်လေ။
Mobile – ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ဆို ချွေတာရေး ဟင်းစပ်တွေပါ ရေးပါ့မယ်။
garuda – လွှတ် ကောင်းတယ် ဆိုပဲ။ ဒါက အညာလေသံပေါ့။
padonmar – အစ်မ ရေ ကြုံရင် ချက်ကျွေးပါ့မယ်။ ခုတော့ ဖတ်ရရုံနဲ့ ကျေနပ်ပေးပါရှင်။
ဗိုလ်ကြီး – ဆင်သတ် အရပ်ဝေ ဆိုတဲ့ စကားက ဗိုလ်ကြီးတို့က စတယ်ထင်ပါရဲ့။
သဂျီးခင်များ… ဇာလေးပို့စ်ကို Health & Fitness – Food, Drink & Recipes မှာထည့်ပေးဖို့ သူ့ဘဲအနေနဲ့ တောင်းဆိုပါတယ်။ သူ့ဘဲလို့ဆိုရတာ နောက်တခါ ဟင်းချက်နည်း ရေးရင် အကောင်ပလောင် ရှာမနေရအောင်ပါ။
ဇာလေးအနေနဲ့လည်း နောင်တခါ ပို့စ်တင်တဲ့အခါ ကက်တီဂိုရီမှာ ခေါင်းစဉ်ထည့်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့၊ ဒါမှ နောင်လိုချင်တဲ့အခါ စာဖတ်သူများ အလွယ်တကူ ရှာလို့တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဦးကြောင်ကြီးစာတွေ နယူးယောက်တိုမ်းစ်နဲ့ ဝေါစထရိဂျာနယ်မှာ အရွေးခံရတာ သတင်းစာတိုက် အယ်ဒီတာလူဂျီးတွေ အဲသလိုရှာရင်း တွေ့သွားလို့.. အခုတော့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း သတင်းစာဆယ်စောင်မှာ ဦးကြောင်ကြီး ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးကတော့ သင့်တော်မည့်သူ ရှာတုန်းပဲကွဲ့… အိမ်ထောင်ရှင်မ ပီပီသသ ချက်နည်းပြုတ်နည်း နားလည်၊ စာပေလည်း စိတ်ဝင်စား၊ ရုပ်ရည်ရူပကာလည်းတောင့်ဖြောင့်၊ စိတ်ထားလည်းဖြူစင်၊ နိုင်ငံဂျားအတွေ့အကြုံလည်းရှိ၊ ရွာထဲက လူဂျီးသူမတဦးဦးကလည်း အတည်ပြုထောက်ခံ ဒါမျိုးတွေ့ရင်တော့ ဦးကြောင်တကိုယ်လုံး ပုံအပ်ဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး… ဒ…ဂယ်….ဗာ….
ဦးကြောင်- မနေ့က ပို့(စ) တင်ခါနီး မှာ catagory ဘာတင်ရမှန်း စဉ်းစားမရလို့ပါ။ ခုလည်း ရေးပြီးသားပို့(စ) ကို ဘယ်လို Editပြန်လုပ်ရမလည်း မသိပါဘူးရှင့်။ အမြင်မတော်ရင် သင်ပေးသွားကြပါ။
ရေးပြီးသားပိုစ့်ကို Edit ပြန်လုပ်ရဖို့က အရင်စားများများရေးပြီး ပိုစ့်ကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်ကာ စွမ်းရည်အရင်ပြရသေးတယ်ဗျ။ ပိုစ့်ရေးသက်လေးကြာလာရင်တော့ Edit ပြန်လုပ်လို့ ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးရမှာပါလို့ တဆင့်စကားသိထားပါတယ် sweet ရေ။ ဒါကြောင့် ဆက်ရေးပါ အားပေးဖတ်ရှု့မှာပါခင်ဗျ။
ဪ၊ ဟုတ်ကဲ့ ကို ခင်ခ။ ဒါဆို စာများများ ရေးဖို့ ဘယ်ဘက်က မှ လွတ်ဘူးပေါ့နော်။
အကြံပေးနဲ့ အားပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
တူတော်မောင်ကြောင်ကြီး မင်းအတွက်ချန်ထားတဲ့ ငါ့တူမ
ဒီပိုစ့် ကို အခေါက်ခေါက် ဖတ်ပြီးတော့ ဘာမန့် ရမလဲ .. စဉ်းစားရင်း .. စဉ်းစားရင်းးးးးးးး ဘာမန့် ရမှန်း မသိတော့လို့ .. … အဲဒါ လာမန့် တာဗျို့ …။
Mလုလင် – အခေါက်ခေါက်ဖတ်လိုက်ကြောင်း သိရတာကို ကျေနပ်ပါတယ်ရှင့်။
ဖတ်ပီး..ဂလု ကနဲ တံတွေးမျိုချသွားပါဂျောင်း….သွေးနဲနဲတိုးတတ်ပေမဲ့
ကိုကြီးမိုက်က ဒညင်းသီးကြိုက်တတ်ရင် “ဒညင်းသီးရယ်၊ ဝက်သားရယ်၊ ပျားရည်ရယ်” ဆီပြန်ဟင်းချက်စားကြည့်ပါလား။
ဒညင်းသီးက အစိမ့်အရသာက ဝက်သားထဲဝင်၊ ပျားရည်က အချိုက ဒညင်းသီးနဲ့ ဝက်သားထဲဝင်၊ သူ့အချင်းချင်း အရသာပြန်ထိမ်းပြီး စားလို့ အတော်ကောင်းပါတယ်။
သွေးတိုးမှာ စိုးရင် ဒန့်ဒလွန်ရွက်လေးကို ဟင်းချိုချက်လိုက်ပေါ့ဗျာ။
ဂယ်ကျွေးဘဲနဲ့… ဟင့် .. မစားရ သရေခံ :buu:
ဟယ်…. စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ရေးရတဲ့လူက လည်း မစားနိုင်တဲ့ အချိန်မှာရေးရတာပဲလေ။ နော်။
ခိုင်ဇာလင်းရဲ့ ပွဲဦးထွက် ဧည့်ခံပွဲမှာ ဟင်းစပ်တွေကြည့်ပြီး တရွာလုံး သွားရေယိုသွားကြတယ်။ :harr:
ဟင်းစပ်လေးတွေက ရိုးရှင်းပြီး အစပ်အဟပ်တည့်ပုံပ
ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားရမှာ ပျင်းလို့ ဧည့်သည်လုပ်လို့ရမယ့် အချိန်ကိုပဲ မျှော်တော့မယ်။ :hee:
မမ ရေ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဟင်းများများကြီးမကြိုက်ဘူး။ မြန်မာ ဟင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေပဲကြိုက်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ချက်စားရမှာလည်း ပျင်းတယ်။ အဲဒါ တူတယ်။
ရွာထဲအ၀င်နောက်ကျပေမယ့် ချစ်သူခင်သူတွေ ၀ိုင်းနေတာပဲနော်
မရဘူး ဟင်းစပ်တွေရေးပြီးမှတော့ ဒီအပတ်လာလည်မယ်
နှင်းဆီ ရေ။ ရောက်ခါစ ဆိုတော့ ဒီလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြတာပါ။
ဟင်းက တော့ စပ်ပဲ စပ်တတ်တာ။ အရမ်းကြီး မချက်တတ်ဘူးရယ်။
Khaing Zar Winရေ
(ရောက်ခါစ ဆိုတော့ ဒီလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြတာပါ။)
နောက်ဆရာမကြီးက မိတ်ဆက်ပေးလို့လဲ အားလုံးက ၀မ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုကြတာလဲမှန်ပါတယ်။
အမြဲမပြတ်စာတွေရေးနေမယ်ဆိုရင် ရွာထဲက အမြဲအားပေးနေမှာလဲ အမှန်ပါဘဲ။
အယ်။ ဦးပေါက်၊ ကျနော် ပြောတာ အဲ့ သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ကြိုဆိုတာကို ကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗိုက်ချာနေတဲ့ … တူညားကို …. ဝေဒနာ ပေးတယ် … ဟင့် …
ရေးပြထားတာတွေကလည်း … စားလို့ကောင်းမယ့် ဟင်းတွေချည်းပဲ ….
ဒါနဲ့ … ဒီနေ့ အစ်မတို့အိမ်ဘာဟင်းချက်လဲဟင် … အဟီးးး နီးရင် လာစားမလို့ပါချင့် …. ခွိခွိ ။
အန်နီးဝေး … ကြိုဆိုပါတယ်အစ်မရေ ။ :gee:
အစ်မလည်း ဒီ ဟင်းစပ်တွေကို မစားရတာကြာလို့ရေးထားတာပါဆိုနေ။
နွားနို့ခဲကို ဆီပြန်ချက်၊ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်၊ မန်ကျည်းရွက်သုပ်၊ သရက်ကင်း